Yekutanga moyo kudzidza neApple Watch kunopera mumwedzi iri kuuya | Ndinobva mac
Yekutanga moyo kudzidza neApple Watch kunopera mumwedzi iri kuuya
Maitiro ari kutorwa naApple Apple Watch inotarisana nehutano uye tsika dzakanaka. Imwe yezviito zvakawanda zvairi kutora mune izvi kudzidza kwemoyo neavo vashandisi vakasaina kuchirongwa chakasimudzirwa nekambani. Muchidzidzo ichi, kuwedzera kuApple nevashandisi, parizvino chete vari muUnited States, ane mukurumbira Stanford University of Medicine anopindira.
Chidzidzo chakatanga munaNovember 2017 uye Mhedzisiro yekutanga inotarisirwa kuunganidzwa inotevera Ndira.. Nzvimbo dziripo dzechinangwa chekuona hutachiona hwakakurumidza kupera.
Kuti utore chikamu muchidzidzo ichi, zvaive zvakafanira kuti ugare muUnited States, upfuure makore makumi maviri nemaviri uye uine iPhone 22s kana yakakwira, pamwe neApple Watch Series 5 kana gare gare. Vatori vechikamu vakatora chikumbiro Apple Mwoyo Kudzidza uye vaitofanira kutora Apple Watch voenda nayo.
Kana wachi yeApple ikaona irregular rhythm, kubvunza kune nyanzvi iyo inoziva nezve chidzidzo kunopihwa. Kazhinji ivo vanokumbirwa kuti vashandise chaiyo yekutarisa kuti vatarise kupururudza kwenguva yevhiki rimwe chete, kuti vaite kudzidza kwakadzama. Chinangwa chechidzidzo ndechekuona kweakakomba mamiriro ezvekurapa, sekushaya moyo kana chero tsaona yemoyo.
Asi zvisinei nemhedziso yechidzidzo ichi, lRunyerekupe runoratidza Apple Watch Series 4 nekuvandudza mukutora zvakakosha zviratidzo, Kuvandudza kuonekwa kweatypical moyo mutinhimira mamiriro. Ichi chidzidzo chekare chinogona kubatsira mukugadzirwa kweApple Watch, kugadzira dhizaini yakakosha sensors ive yakakwana. Chero zvazvingaitika, dhizaini yeApple Watch itsva ichiri chakavanzika uye hatigone kuendesa mberi nekuvandudza kana kana izvi zvichizoendeswa kuApple Watch Series 5. Zvese zvinoita senge, iyo flatter dhizaini yaizobvumidza yakawanda pamusoro pekusangana neiyo ruoko uye nekudaro kuyerwa kwaizove kwakarurama.
Chero zvazvingaitika, isu tichaona dzese nhau idzo Apple Watch ichave nayo mune yakakosha musi waGunyana 12.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Yekutanga moyo kudzidza neApple Watch kunopera mumwedzi iri kuuya
MacBook kana iPad kudzidzisa makirasi muchikoro chepuraimari kana chepakati?
Ndeipi MacBook yandinonyanya kufarira kana ndiri mudzidzisi pachikoro chesekondari?